ढोगिन्छ किन ? | Chhatapost.com
Home Breaking News ढोगिन्छ किन ?
आफूभन्दा ठूलालाई ढोग गर्ने संस्कार परापूर्व कालदेखि चल्दै आइरहेको छ । पुत्रले आफ्ना मातापितालार्ई र बुहारीले सासुका साथै श्रीमान्लाई ढोग गर्ने चलन धेरै पुरानो हो । यो चलन धेरै वा थोरै सबै जातिमा छ । ठूलाबडा अर्थात् सम्भ्रान्त परिवारमा ढोग गर्ने चलन अझ बढी छ । उनीहरूले आफूभन्दा ठूलालाई दर्शन गरेँ भन्दै शिर निहु-याउँछन् । ठूलाबडाले पनि ढोग्नेको शिरमा हात राखी दिँदै चिरञ्जीवी भएस्, भाग्यमानी भएस् आदि भनी आशिष दिन्छन् तर आजकलका छोराछोरी र बुहारीले आफूभन्दा ठूलालाई ढोग गर्न त्यति ध्यान दिएको देखिँदैन । एक किसिमले भन्ने हो भने योे चलन हराउँदै छ ।
हामी सबैलाई थाहा भएकै कुरा हो कि ढोग्दा आफूभन्दा ठूलाको गोडा छुनुपर्छ । जब कसैले हाम्रो गोडा छोएर ढोग्यो भने हामीले के गर्नुपर्छ ? उसलाई हामीले आशिष दिनुपर्छ । साथै देवतालाई पनि सम्झनुपर्छ । ढोग गर्न आउनेलाई हामीले भाग्यमानी भएस्, सुख शान्ति मिलोस् आदि भनी आशिष दिनुपर्छ । यसरी आशिष दिँदा आशिष दिनेले भित्री हृदयदेखि नै हर्षित भई दिनुपर्छ । खास गरेर हामीले हाम्रो खुट्टाले अन्जानमै पनि कसैलाई नछोओस् भन्ने प्रयास गरिरहनुपर्छ । यदि हाम्रो खुट्टाले अन्जानमै पनि कसैलाई छोयो भने नराम्रो हुने अर्थात् अशुभ हुने मान्यता छ । हाम्रो खुट्टाले कसैलाई छोयो भने हामीलाई दोष लाग्छ । यो दोषबाट बच्न हामीले मनमनै भगवान्सँग माफी माग्नुपर्छ । अनि त्यस मानिससँग पनि माफी माग्नुपर्छ । आफूभन्दा ठूला अर्थात् थकालीलाई आदर, सत्कार, मानसम्मान गरेर ढोग्नु अत्यन्तै उत्तम हुन्छ भन्ने मान्यता छ । ढोग गर्दा पनि प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा धेरै नै फाइदा छ । जस्तो कि श्रद्धापूर्वक ढोग गरेँ भनी गोडा छुनु आफूभन्दा ठूलाको अगाडि नतमस्तक हुनु हो । यसबाट हामीलाई विनम्रता प्राप्त हुन्छ । अनि मनमा शान्ति हुन्छ । यसका साथै ढोग गरेँ भन्नेले आफूभन्दा ठूलालाई आफ्नो आचरणले प्रभावित पार्न पनि सक्छ ।
यसैगरी गोडा छोएर ढोग गर्नेबित्तिकै हामीलाई दुवै हातले हाम्रो शिरमा छोएर भाग्यमानी भएस् भनेर मान्यवरले आशिष दिन्छन् । यो प्रक्रियामा हाम्रो हातले मान्यवरको गोडा छोइरहेको हुन्छ । अनि मान्यवरको सकारात्मक ऊर्जा सञ्चार भएर आशिषका रूपमा हाम्रो शरीरमा प्रवेश गर्छ भन्ने मान्यता पनि छ । यसले हाम्रो आध्यात्मिक र मानसिक विकासमा पनि सहयोग पु-याउँछ ।
आज आएर नेवार समुदायमा पनि अन्य समुदायमा जस्तै ढोग गर्नुको साटो नमस्कार भन्न चलन चल्न थालेको छ तर ढोग गरेँ भनी शिर निहु-याउने नेवारी महिलाको सङ्ख्या पनि कम छैन । कतै सभा समारोह वा भोजभतेरमा नेवारका आफन्त जम्मा भएको ठाउँमा आफ्नो शिर निहु-याउने थकालीलाई ढोग गरेँ भन्ने नेवारहरू अझै पनि छन् । यो संस्कारलाई बचाइराख्नुपर्छ ।(गोरखापत्र)
Previous articleआधा भाले र आधा पोथीको स्वरूप भएको विश्वमै दुर्लभ चरा
Next articleके नेपाल सरकारले “नेपाल भारत मैत्री बहु–प्राविधिक संस्था” जोगाउला त ?